Cup rosters taking shape
When the World Cup descends upon South Africa next month, most participating nations will bring some players with them. When the World Cup descends upon South Africa next month, most participating nations will bring some players with them.
When the World Cup descends upon South Africa next month, most participating nations will bring some players with them. When the World Cup descends upon South Africa next month, most participating nations will bring some players with them. When the World Cup descends upon South Africa next month, most participating nations will bring some players with them.
When the World Cup descends upon South Africa next month, most participating nations will bring some players with them.